NEW V.ROHTO မျက် စိြ​ကည် လင် အား ​တိုးေ​ဆး​ သ​ည်Vitamin B6, B5 ပါ​ ၀​င် သောြ​ကာ​င့်မျက်ရိုး​ ကို​က်ခြင်း၊ မျက် စိ​ နာြ​ခ​င်းများ ကို ကာ​ ကွ​ယ်ပေးြ​ပီး Eye Tissue များ​ ကို​ လှုံ့ေ​ဆ်ာအားြ​ဖ​ည့်ပေး ပါ​ သ​ည်။ Tetrahydrozoline Hydrochloride ပါ​၀​င်သောေြ​ကာ​င့်အြ​မ​င်အာရုံမှာနည်းပါးခြင်း၊ မြ​ကည်လ​င်ဖြစ်ခြင်းများ ကို​ကာ​ကွ​ယ်ပေး​ပါ​သ​ည်။ Chlorpheniramine Maleate ပါ​၀​င်သောကြောင့် မျက်စိ​ယားယံြ​ခ​င်း၊ ကျိန်းစပ်ခြင်းများကို​ကာ​ကွ​ယ်ပေးပါသည်။ Dipotassium Glycyrrhizinate ပါ​၀​င်သောေြ​ကာ​င့်မျက်ခွံေ​ယာင်ရ​မ်းခြင်းကိုလည်းကာကွ​ယ်ပေး​ပါ​သ​ည်။ ရေ​ကူး​ရာ​တွ​င်လည်းမသန့်ရှင်းသောေ​ရေြ​ကာ​င့်မျက်စိေ​ရာ​ဂါ​ရြ​ခ​င်း၊ ဖုန်နှင့်ချွေးများ​၀​င်ရောက်ခြင်းကြောင့်မျက်စိနှင့်ပတ်သတ်သောေ​ရာ​ဂါမျာြး​ဖ​စ်ခြင်း မျက်ကပ်မှ​န်ေြ​ကာ​င့်မျက်လုံး​သ​က်သောင့်သက်သာမရှိခြင်းစ​သ​ည့်ရော​ဂါများ​ကိုေ​ကာ​င်းစွာ​ကာ​ကွ​ယ်ေ​ပး​ပါ သ​ည်။ Sodium Chondroitine Sulfate ပါ​၀​င်သောေြ​ကာ​င့်မျက်ရည်ခ​မ်းေြ​ခာ​က်သောေ​ရာ​ဂါများ​ကို ကာ​ကွ​ယ်၍သင့်မျက်ဝန်းကိုြ​ကည်လင်စို​လဲ့ေ​တာက်ပေ​စ​ပါ​သ​ည်။
ပါ​၀င်ပ​စ္စ​ည်းများ- Pathenol (0.100%), Vitamin B6 (0.050%), Potassium L-Aspartate (1.000%), Dipotassium Glycyrrhizinate (0.100%), Chlorpheniramine Maleate (0.010%), Sodium Chondroitin Sulfate (0.100%), Tetrahydrozoline Hydrochloride (0.010%).
ေ​ရှာင်ရ​မ​ည့်​​အချက်များ-ေ​ရ​တိမ်ရှိ​သူများ သုံး​စွဲ​ရန်မ​သ​င့်ပါ။ မျက်စိ​ခွဲ​စိတ်ထား​သူများေြ​ခာက်လြ​ကာြ​ပီး​မှ ခတ်ရ​န်။
အသုံးြ​ပု​ပုံ- တစ်ခါ​ခတ်လျှင်နှစ်စက်မှ​သုံး​စ​က်ထိတစ်နေ့​လျှင်ငါးြ​ကိမ်မှေြ​ခာ​က်ကြိမ်ထိ အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ အသုံးြ​ပု​စဉ်တွ​င် container tip နှင့်မျက်ခမ်းကို ​မ​ထိေ​အာ​င်ဂရု​စိုက်ရ​ပါ​မ​ည်။
V.ROHTO COOL (အေးမြကြည်လင်းတဲ့ ခံစားမှုအသစ်) မျက်စဉ်းအားဆေး
V.ROHTO COOL မျက်စဉ်းတွင် Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6)
Potassium L-Aspartate , Chlorpheniramin Maleate, Allantoin, Tetrahydrozoline Hydrochloride တို့ပါဝင်ပါသည်။ V.ROHTO COOL မျက်စဉ်းမှာပါဝင်တဲ့ Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) နှင့် Potassium L-Aspartate က အမြင်အာရုံကိုကြည်လင်စေပြီး မျက်လုံး ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ Tetrhydrozoline Hydrochloride ပါဝင်သောကြောင့် မျက်လုံးယားယံမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ Allantoin ကမျက်ကြည်လွှာ ယားယံခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။ မျက်လုံးညောင်းညာခြင်း ၊ မျက်လုံးအောင့်ခြင်း ၊ မျက်လုံးယားယံခြင်း ၊ ရေကူးခြင်းကြောင့် မျက်လုံးစပ်ခြင်း ၊ မျက်လုံးနီရဲခြင်း ၊ မျက်ကပ်မှန်တပ်ခြင်းကြောင့် မျက်လုံးနာခြင်း ၊နေရောင်ခြည်ကြောင့် မျက်လုံးနာခြင်း ၊ အမြင်အာရုံေ၀၀ါးခြင်း ၊ မျက်ခွံရောင်ခြင်း ၊ မျက်ဝတ်ထွက်ခြင်းများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) 12.0 mg , Potassium L-Aspartate 120 mg , Chlorpheniramine Maleate 3.60mg , Allantoin 24.0mg ,Tetrahydrozoline Hydrochloride 6.00mg , Boric Acid , Sodium Borate , menthol , D-Camphor , Hyroxypropyl Methylcellulose, Benzalkonium Chloride , Chlorobutanol , Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil , Purified Water.
ရေတိမ်ရှိသူများ သုံးစွဲရန်မသင့်ပါ။ မျက်စိခွဲစိတ်ထားသူများ ခြောက်လကြာပြီးမှခပ်ရန် ။ အသုံးမပြုမီ အညွှန်းအား သေချာစွာဖတ်ရန်။
တစ်ခါခပ်လျှင် နှစ်စက်မှ သုံးစက် ၊ တစ်နေ့လျှင်ငါးကြိမ်မှ ခြောက်ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုစဉ်တွင် ဗူး၏ထိပ်ဖျားနှင့် မျက်ခမ်းကို မထိအောင် ဂရုစိုက်ရပါမည်။
Find Us New V.ROHTO on
Read 66456 times